Fetereza Inokosha Yoshaikwa Munyika
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekushaya fotereza yepamusoro zvekuti vazhinji vava kutyira kuti goho regore rino richange rakadzikira.
Makambani anogadzira fotereza munyika akaita se Sables, Chemplex, Zimbabwe Fertilizer Company ne Windmill ari kuchema chema nemagetsi asiri kuwanikwa munguva yekugadzira fetereza, pamwe nekushaikwa kwemari munyika izvo zviri kuita kuti vatadze kugadzira fotereza inokwana.
TA Holdings, varidzi ve Sables, vanoti vakabvumirana ne ZESA kuti idzikise mari yavanobhadhara yemagetsi anga achidhura kuitira kuti vakwanise kugadzira fotereza.
Asi mukuru weChemplex, Va Misheck Kachere, vaudza bepanhau re Herald kuti fotereza iri kunetsa nekuti makambani ari kunetseka nekushaikwa kwemagetsi nguva zhinji. Vanotiwo havana mari yekuti fetereza yakatengwa itakurwe kubva kuMozambique.
Fotereza inonzi iri kutengeswa pamikoto, uye shoma iri kuwanikwa muzvitoro, inenge ichidhura.
Mukuru weCommercial Farmers Union, Va Charles Taffs, vanoti kutadza kuronga kwehurumende chimwe chizvinhu zviri kuita kuti fotereza inetse kuwana mwaka wega wega.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekurima, Va Moses Jiri, vanoti komiti yavo ichange ichibuvunzurudza veGMB pamusoro penyaya iyi neChipiri mudare reparamende vachiti kushaikwa kwefotereza munyaya inyaya iri kuvashungurudza zvikuru.